“आर्मीहरु फटाहा हुन्छन् , जाहाँ गयो त्यही श्रीमती बनाउन खप्पिस् हुन्छन्” - रुपनी जि.एम
रुपनी जि.एम । कुरा आज भन्दा झण्डै ७/८ महिना पहिलेको हो । जति बेला म नेपालगञ्जमा बसेर पत्रकारीता गर्दै थिएँ । एक दिन मलाई एक जना अधिकारकर्मी दिदीको फोन आयो र –“बैनी तपाँई काहाँ हुनु हुन्छ ? जहाँ भएनी हामीसंग तपाँई राँझा ब्यारेकमा गईदिनु पर्ने भयो । आर्मी
अमेरिकामा वेटरको जागिर खाँदै पाइलट बनेको विजय लामाको पाइलट यात्रा
विमान चालक बन्ने विजय लामाको बच्चैदेखिको हुटहुटी हो । उनकै शब्दमा भन्दा विमान चालक नै बन्छु भनेर उनी पढ्थे, खेल्थे, हिँड्थे, सुत्थे, निदाउँथे र ब्युँझन्थे । ‘त्यतिबेला एउटा प्लेन आकाशमा उड्दा सिंगो काठमाडौंलाई थाहा हुन्थ्यो । म आकाशतिर हेथेर्ँ र कल्पिन्थेँ,’
रजस्वला र ऋषि पञ्चमीको कनेक्सन: ‘सुनौलो दिन’ VS ‘कालो दिन’ !
हिन्दुत्व अर्थात जिवन वाँच्ने एक निर्देशिका, जसले विभिन्न सस्कारहरुले भरिएको पद्धतीले जीवनको मार्ग देखाएको छ । जसले त्यो समयदेखि अहिलेसम्मका मानवीय व्यवहारको सहजताको उपज संस्कारहरु बनाएको प्रष्ट छ । तर जुन आजसम्म आइपुग्दा केही परिमार्जनको अति जरुरी हुन्छ ।
तीजको अवसरमा राजधानीमा लागूऔषध सेवन गरिरहेका ७ महिला पक्राउ
काठमाडौं । तीजको अवसरमा राजधानीमा महिलाहरु लागूऔषध सेवन गरिरहेको अवस्थामा फेला परेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका–११ गोठाटारस्थित सेतो माइक्रो पार्क नजिक डेरा गरी बस्ने ओखलढुङ्गा मान भञ्ज्याङकी २१ वर्षीया पुनम
तीव्र गतिको इन्टरनेट सुविधा : एउटा फिल्म ४४ सेकेण्डमा डाउनलोड
काठमाडौं । फिनल्याण्डको एक मोबाइल नेटवर्क कम्पनीले विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा चल्ने फोर जी मोबाइल इन्टरनेट स्पीड उपलब्ध गराएको दाबी गरेको छ । एलिसा नामको कम्पनीका अनुसार परीक्षणको क्रममा १.९ जिबिपिएसको स्पीड हाँसिल भएको छ, जुन फोर जी मोबाइल इन्टरनेटमा
ठमेलका यौन दलालः १४ वर्षमा २१ पटक थुनिए, रसियनदेखि भारतीय मोडल पनि यौनधन्दामा
काठमाडौं । ‘ए दाइ जाने हो ? माल राम्रो छ ।’ साँझ छिप्पीँदै गएपछि केशर महलबाट सञ्चयकोष भवन हुँदै ठमेलतर्फ अघि बढ्दा सडकपेटीमा उभिएका युवाहरुबाट दैनिकजसो सुनिने शब्द हो यो । उनीहरु यसरी नै यौनकर्मीका ग्राहक फकाइरहेका हुन्छन् । सञ्चयकोष भवनको सडकपेटीमा
पड्किन थालेपछि ग्यालेक्सी नोट सेभेन कम्पनीले फिर्ता लिने
एजेन्सी । सामसुङ मोबाइलमा समस्या देखिएपछि कम्पनीले बजारमा पठाएका मोबाइल फिर्ता गर्ने भएको छ । ग्यालेक्सी नोट सेभेन स्मार्टफोन चार्ज गर्दा पड्किने समस्या आएपछि विश्वभर बजारमा पठाएका मोबाइल कम्पनीले फिर्ता लिन लागेको हो । लन्च गरेको एक महिनाभित्रै चर्चित
ल थाहा पाई राख्नुहोस् यी ४ तरिकाले ह्याक हुनसक्छ कुनै पनि स्मार्टफोन
प्रविधिको यो जमानामा कुनै इलेक्ट्रोनिक डिभाइस ह्याक हुनु नौलो होइन न गाह्रो नै छ। ह्याकर तपाईको स्मार्टफोनबाट सारा डाटा कपी गरेर लैजाला थाहासम्म नहुन सक्छ। यसरी हुन सक्छ ह्याक, ४ तरिका अनि कसरी बच्ने? १. MySpy एप यो एप कसैले तपाइको स्मार्टफोनमा इन्स्टल गरि
हैट बुहारीको भिडियो हेरेर ससुराको पसिना छुट्यो - भिडियो सहित
करन जोहरको अपकमिङ फिल्म ‘ए दिल हे मुस्किल’को पहिलो टिजर भिडियो रिलिज भएसंगै बलिउडमा नयाँ तरंग आएको छ। तरंग यसकारणकी पहिलो पटक विश्व सुन्दरी ऐश्वर्या रायलाई यस्तो स्टिमी सिनमा देखिने भएको छ। टिजरमा देखाइएको रणवीर कपूरसंगको इन्टिमेट सिनको बढी चर्चा चलेको
आईफोन ७ को मूल्य कति ? रिलिज अगावै यस्तो चर्चामा आयो ....
एप्पलले ७ सेप्टेम्बरमा आईफोन ७ र आईफोन ७ प्लस लन्च गर्ने तयारी गरेको छ। यो पटक आईफोन आफ्नो फिचरको कारण नभई मूल्यको कारण चर्चामा छ। चीनको एक रिपोर्ट अनुसार आईफोन ७ र आईफोन ७ प्लसको मूल्यको खुलासा भएको छ। फोनराडारको एक रिपोर्ट अनुसार आईफोन ७ र आईफोन ७ प्लस तीन
अन्ततः श्रीमति र दुई छोरा लिन जीवन फिलिपिन्स जाने, सहयोगको लागि अपिल
चितवन । विभिन्न तर्क वितर्क र जोया-जिवनको खबरले मिडिया तातिरहेको बेला जिवन फिलिपिन्स जान चाहेको कुरा आफ्नो फेसबुक मार्फत सार्बजनिक गरेका छन् । जिवन संग सम्पर्क गरेर जान्न खोज्दा आफ्नो श्रीमति र दुई नानीहरुलाई लिन यही भदौ महिनाको २२/२३ मा जान लागेको बताए ।
यौन काण्डको कारण सन्दीपको मन्त्री बर्खास्त, सरकारमा तहल्का मच्चियो !
काठमाडौं । भारतका एक मन्त्री सन्दिप कुमारको यौन काण्डले नयाँदिल्ली सरकारका तहल्का मच्चिएको छ । उनको यौन सिडी सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले बिहीबार महिला एवं बाल विकासमन्त्री सन्दीप कुमारलाई पदबाट हटाएका छन् । चुनाव पूचारको अभियानको